Soosaarayaasha Silsiladda Siibidaysa ee HDPE Yaryarka Buluugga Fiican | Erbo
Magaca: HDPE Fudud Fudud Buluug Buluug ah.
Midabka: Buluug Fudud
Astaamaha: Isticmaalka alaabta ceeriin ee HDPE, ultraviolet-proof, cimri dherer, fudud si loo rakibo, kharash yar. Muuqaalka midabka buluuga ah ee khafiifka ah waxaa loo isticmaali karaa calaamad digniin ah.
Ku qanacsanaanta dukaamadu waa diiradeena koowaad. Waxaan taageersanahay heer joogto ah oo xirfad, tayo, kalsoonida iyo dayactirka Qiimaha Gaarka ah ee sabeynta qulqulka, Shirkadeena waxay haysaa ganacsi aamin ah oo ay ku qasan yihiin run iyo daacadnimo si ay u ilaaliyaan xiriirada muddada dheer macaamiisheenna.
Biyo sabayn ah, Shirkadeena ayaa ah shirkad caalami ah oo wax soo saare ka ah badeecada noocan ah. Waxaan kuu soo bandhigeynaa xulasho la yaab leh oo ah waxyaabo tayo sare leh. Hadafkeenu waa inaan kugu qancino ururintayada gaarka ah ee alaabooyinka maskaxda leh iyadoo la siinayo qiimo iyo adeeg aad u fiican. Hadafkeenu waa mid fudud: Si aan u gaarsiino alaabada ugu fiican iyo xalka iyo adeegga macaamiisheena qiimaha ugu hooseeya ee suurtogalka ah.
Tayo-sare ayaa timaadda 1aad; kaalmada ayaa ugu horeysa; ganacsiga ganacsigu waa iskaashi ”waa falsafadeena ganacsi ee ganacsi taas oo si joogto ah loo ilaaliyo loona daba galo ganacsigeena qiimo jaban oo dul sabeynaya buoy, Si aad wax badan uga ogaato waxa aan shaqsi ahaan kuu qaban karno, na soo wac markasta. Waxaan rajeyneynaa inaan kugula shaqeyno isdhexgal shirkadeed oo waqti dheer soconaya adiga iyo adiga.
Qiimo jaban oo dul sabaynaysa buoy, Injineer u qalma R&D ayaa laga yaabaa inuu halkaas u joogo adeeggaaga wadatashiga waxaanan isku dayi doonaa sida ugu fiican ee aan u kulano shuruudahaaga Marka xusuusnow inaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto si aad wax uga weydiiso. Waxaad awoodi doontaa inaad noo soo dirto emayl ama aad noogu soo wacdid ganacsi yar. Sidoo kale waxaad awood u leedahay inaad u timaaddid ganacsigeena keligaa si aad aqoon dheeraad ah noogu hesho. Waxaana hubaal ah inaan kuu soo bandhigi doono oraahda ugu fiican iyo adeegga iibka kadib. Waxaan diyaar u nahay inaan dhisno xiriir xasiloon oo saaxiibtinnimo leh ganacsatadeena. Si loo gaaro guul labada dhinac ah, waxaan sameyn doonaa dadaalkeena ugu fiican si aan u dhisno iskaashi adag iyo wada shaqeyn hufan oo lala yeesho asxaabteena. Iskusoo wada duuboo, waxaan halkaan ujoognaa inaan soo dhaweyno weydiimahaaga mid ka mid ah alaabtayada iyo adeeggayaga.
Hore: HDPE Silsilad Buluug ah oo Buluug ah
Xiga: HDPE Anti-shil baaldi